Benedict Cumberbatch – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
The Mauritanian (2021) Unicode ဒီတဈခါတငျဆကျပေးမှာကတော့ မိုဟာမဒူအိုဆလာဟီရဲ့ကိုယျတှဖွေ့ဈရပျကို ရိုကျကူးတငျဆကျထားတဲ့ The Mauritanian ဆိုတဲ့ကားလေးဖွဈပါတယျ Legal drama အမြိုးအစားမြိုးဖွဈပွီးတော့ box office မှာလညျး ၁.၅ သနျးအထိရရှိထားပါတယျဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ ဆလာဟီဆိုသူဟာ အကွမျးဖကျလို့စှပျစှဲခံရပွီး သကျသမေရှိဘဲထောငျထဲမှာ နှဈတှအေကွာကွီးထိနျးသိမျးထားခွငျးခံရပါတယျ တဈနမှေ့ာသူ့ရဲ့အမဖွေဈသူက သားဖွဈသူသလေား ရှငျလား မသိတာကွောငျ့ စုံစမျးရာကနေ အကွမျးဖကျတှအေတှကျအမှုလိုကျပေးလရှေိ့တဲ့ရှနေ့နေနျစီဟျောလနျဒါနဲ့တှသှေ့ားပါတယျအမှုလိုကျရငျးနဲ့ ဆလာဟီဟာ သကျသအေတိအကမြရှိဘဲထိနျးသိမျးခံရတာဖွဈကွောငျးနဲ့ထိနျးသိမျးထားစဉျမှာလညျး နှိပျစကျညငျးပနျးပွီး အတငျးအကပျြဝနျခံခိုငျးတာဖွဈကွောငျး သိရှိခဲ့ရပါတော့တယျ နနျစီတဈယောကျအပွဈမဲ့တဲ့ဆလာဟီလှတျမွောကျအောငျလုပျပေးနိုငျပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတျလမျးထဲမှာဆကျလကျကွညျ့ရှုလိုကျကွပါဦးကတြျောတို့ရဲ့ ဒေါကျတာအဆနျး Benedict Cumberbatch လဲပါတာမို့ ကွညျ့ဖွဈအောငျကွညျ့ဖို့တိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။ Credit Review ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ WinSu LeiMyat ဖွဈပါတယျ Zawgyi ဒီတစ်ခါတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ မိုဟာမဒူအိုဆလာဟီရဲ့ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ်ကို ရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ The Mauritanian ဆိုတဲ့ကားလေးဖြစ်ပါတယ် Legal drama အမျိုးအစားမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ box office မှာလည်း ၁.၅ သန်းအထိရရှိထားပါတယ်ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ဆလာဟီဆိုသူဟာ အကြမ်းဖက်လို့စွပ်စွဲခံရပြီး သက်သေမရှိဘဲထောင်ထဲမှာ နှစ်တွေအကြာကြီးထိန်းသိမ်းထားခြင်းခံရပါတယ် တစ်နေ့မှာသူ့ရဲ့အမေဖြစ်သူက သားဖြစ်သူသေလား ရှင်လား မသိတာကြောင့် စုံစမ်းရာကနေ အကြမ်းဖက်တွေအတွက်အမှုလိုက်ပေးလေ့ရှိတဲ့ရှေ့နေနန်စီဟော်လန်ဒါနဲ့တွေ့သွားပါတယ်အမှုလိုက်ရင်းနဲ့ ဆလာဟီဟာ သက်သေအတိအကျမရှိဘဲထိန်းသိမ်းခံရတာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိန်းသိမ်းထားစဉ်မှာလည်း နှိပ်စက်ညင်းပန်းပြီး အတင်းအကျပ်ဝန်ခံခိုင်းတာဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရပါတော့တယ် နန်စီတစ်ယောက်အပြစ်မဲ့တဲ့ဆလာဟီလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ ဇာတ်လမ်းထဲမှာဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ကြပါဦးကျတော်တို့ရဲ့ ဒေါက်တာအဆန်း Benedict Cumberbatch လဲပါတာမို့ ကြည့်ဖြစ်အောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။ Credit Review ဒီဇာတ်ကားကိုဘာသာပြန်ပေးသူကတော့ WinSu LeiMyat ...
The Courier (2020) Unicode ဒီတဈခါကတော့ မငျးသားကွီး Benedict Cumberbatch ရဲ့ ဆကျသားဆိုတဲ့ကားလေးကိုတငျဆကျပေးလိုကျပါတယျ။ဗွိတိနျနိုငျငံက သာမနျစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ဂရပျဗဲကို ဗွိတိနျအစိုးရက ဆိုဗီယကျပွညျထောငျစုမှာ အလုပျသှားလုပျပေးဖို့ ကမျးလှမျးလာပါတယျ။ သူလုပျရမှာက ပုံမှနျလုပျနကေအြတိုငျး စီးပှားရေးသှားလုပျပွီး ဆိုဗီယကျဖကျကလူပေးလိုကျမယျ့ ပစ်စညျးထုပျတှကေို သယျလာပေးရမယျ့ ဆကျသားသကျသကျပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ နယူးကလီးယားစဈပှဲကို တားဆီးခငျြနတေဲ့ ဆိုဗီယကျအရာရှိတဈဦးနဲ့ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျသှားခဲ့ပါတယျ။ သူတို့နှဈယောကျအတူတူ ကြူးဘားက နယူးကလီးဘားဒုံးကညျြတှအေကွောငျး သတငျးအခကျြအလကျတှကေို ဆိုဗီယကျကနခေိုးထုတျကွရငျး ကမ်ဘာသမိုငျးမှာ အရေးပါလှတဲ့ နိုငျငံတကာပဍိပက်ခတဈခုထဲမှာ ပါဝငျလာရတဲ့အကွောငျးကို စိတျဝငျစားဖှယျ ကွညျ့ရှုကွရမယျ့ ဖွဈရပျမှနျဇာတျလမျးကောငျးလေးတဈကားဖွဈပါတယျ။ Credit Review ဒီဇာတျကားကိုဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Lily Pie ဖွဈပါတယျ Zawgyi ဒီတစ်ခါကတော့ မင်းသားကြီး Benedict Cumberbatch ရဲ့ ဆက်သားဆိုတဲ့ကားလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဗြိတိန်နိုင်ငံက သာမန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဂရပ်ဗဲကို ဗြိတိန်အစိုးရက ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုမှာ အလုပ်သွားလုပ်ပေးဖို့ ကမ်းလှမ်းလာပါတယ်။ သူလုပ်ရမှာက ပုံမှန်လုပ်နေကျအတိုင်း စီးပွားရေးသွားလုပ်ပြီး ဆိုဗီယက်ဖက်ကလူပေးလိုက်မယ့် ပစ္စည်းထုပ်တွေကို သယ်လာပေးရမယ့် ဆက်သားသက်သက်ပါပဲ။ဒီလိုနဲ့ နယူးကလီးယားစစ်ပွဲကို တားဆီးချင်နေတဲ့ ဆိုဗီယက်အရာရှိတစ်ဦးနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်အတူတူ ကျူးဘားက နယူးကလီးဘားဒုံးကျည်တွေအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဆိုဗီယက်ကနေခိုးထုတ်ကြရင်း ကမ္ဘာသမိုင်းမှာ အရေးပါလှတဲ့ နိုင်ငံတကာပဍိပက္ခတစ်ခုထဲမှာ ...
IMDB: 7.2/10 3489 votes
The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) ဇာတ်လမ်းကတော့ ဒုတိယ Hobbit ကား အပြီးကနေ ဆက်ထားပြီး၊ Smaug က Laketown ကို ဖျက်ဆီးလိုက်ပြီး၊ Smaug ကိုလည်း Brad က Black Arrow သုံးပြီး ပစ်သတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ Brad က Laketown လူတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီလို အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သွားတဲ့ လူတွေကို Brad က ဦးဆောင်ပြီး တောင်ကြားထဲက ရွှေတွေကို သွားယူပြီး ဘဝအသစ်စဖို့ စီစဉ်ကြပါတယ်။ ဒုတိယ ကားမှာတုန်းက Thorin က တောင်ထဲက သူ့မြို့ ကိုပြန်သိမ်းဖို့အတွက် လက်နှက်နဲ့ လှေအကူအညီ ပေးဖို့တောင်းဆိုပြီးအောင်မြင်သွားရင် ရွှေတစ်ချို့ကို လူတွေကို ခွဲပေးမယ်လို့ ကတိပေးခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာတော့ Thorin က သူ့ အဖိုးလို ပဲ လောဘတက်ပြီး စိတ်ဖောက်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်သူကိုမှ လည်း ပေးမဝင်တော့သလို ရွှေတွေကိုပဲ ဖွက်ဖို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ Smaug(နဂါး) ...
The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) The Hobbit ပထမဇာတ်ကားအဆက် ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ဒီကားက Lord of the Rings Trilogy ရဲ့ Prequel ဖြစ်ပြီး The Hobbit Trilogy ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကားမှာ Lord of the Rings ထဲက မင်းသားချော Orlando Bloom က Legolas အဖြစ်ပြန်လည်ပါဝင်လာပြီး၊ အခြား ဇာတ်ကောင်အသစ်တွေလည်း အများအပြားပါဝင်လာပါတယ်။ ပထမဇာတ်ကား အစပိုင်းမှာ Dwarf တွေရဲ့ ရတနာတွေ ကြောင့် နဂါးကြီးတစ်ကောင်က Dwarf တွေ မြို့ကို ကျူးကျော်ဝင်ရောက် ခဲ့သလို Dwarf တွေလည်း သူတို့ရဲ့ မြို့ကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ဒီကားမှာ Dwarf တွေက Gandalf နဲ့ Bilbo (Frodo ရဲ့ ဦးလေးဖြစ်သူ) ရဲ့အကူအညီနဲ့ သူတို့ မြို့ထဲကို ခိုးဝင်ပြီး နဂါးကြီးစောင့်ကြပ်နေတဲ့ ရတနာတွေထဲက Dwarf ...
IMDB: 7.8/10 559,179 votes